सिल्टल: बेस्ट अनलाइन वेब स्क्रैपर्स के हो?
स्क्रैपिंग वेब डेटा एक वेबसाइट को नयाँ र मौजूदा डेटा को लक्षित गर्न र भंडारण यो सजिलो पहुँचको लागि खोजी इन्जिन डाटाबेसमा। यो सच छ कि वेब स्क्रैपिंग टूल्स समय संग लोकप्रियता प्राप्त गर्दै छन् किनकी एक वेब क्रलर ले वेब डेटा स्रोतहरु लाई सबै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरु लाई सुलभ बनाउन को लागी पुरा तरिकाले क्रलिंग प्रक्रिया को सरल बनाइयो र सरल बनायो। केहि वेब क्रलर उपकरणहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नो साइटहरू वा ब्लगहरूलाई विधिगत र प्रभावकारी तरिकामा कोडहरूको कुनै आवश्यकता बिना सूचित गर्न अनुमति दिन्छ। तिनीहरू डेटालाई विभिन्न ढाँचाहरूमा बदलिन्छन् र प्रयोगकर्ताहरूको आवश्यकताहरू अनुरूप। यहाँ हामीले वेबसाईट र ब्लगहरू स्क्रैप गर्न केही उत्कृष्ट वेब क्रलर उपकरणहरू छलफल गरेका छौं।
Cyotek WebCopy एक व्यापक, निःशुल्क डेटा स्क्रैपिंग कार्यक्रम हो जसले तपाईंलाई आफ्नो हार्ड ड्राइव मा एक साइट को प्रतिलिपि गर्न को लागी ताकि तपाईं बिना इन्टरनेट जडान। यो कार्यक्रम निर्दिष्ट वेबसाइटहरू स्क्यान गर्न सक्नु अघि तपाईंको डाटा वा सामग्री तपाईको हार्ड डिस्कमा डाउनलोड गर्नु अघि। यो पनि छवियों, वेब पेजहरु, र साइट को स्थानीय सामाग्री जस्तै लिङ्कहरु लाई स्वचालित बनािन्छ, र त्यहि वेबसाइट को भागहरु लाई शामिल गर्दैन जसको खोज इन्जिन को केहि पनि छैन।
एचटीट्र्याक एक नि: शुल्क कार्यक्रम हो जुन इन्टरनेटबाट सम्पूर्ण साइट डाउनलोड गर्नका लागि उपयुक्त कार्यहरू र विकल्पहरू प्रदान गर्दछ। तपाईंको कम्प्युटर वा मोबाइल उपकरणमा।.यसको केहि प्रसिद्ध संस्करणहरु Windows, Sun Solaris, Unix, and Linux हो। यो कार्यक्रमले तपाईंको साइट एकपटक भन्दा बढी भन्दा मिरर गर्न सक्छ र वेब क्रलिंग प्रक्रियालाई सजिलो र छिटो बनाउँदछ। तपाईं तस्बिरहरू, फाइलहरू, एचटीएमएल कोडहरू, डाइरेक्टरीहरूमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ साथै साथै कुनै पनि समयमा डाउनलोड अवरोध गर्न सक्नुहुन्छ।
अक्टोपारे एक शक्तिशाली, नि: शुल्क वेब क्रलर हो जुन सबै प्रकारको डेटा निकाल्न को लागी प्रयोग गरिन्छ जुन तपाईको साइटबाट आवश्यक छ। यो कार्यक्रमले तपाइँको वेबसाइटलाई राम्ररी तरिकामा पछाडि विकल्पहरू प्रयोग गर्दछ र व्यापक कार्यात्मकताहरू प्राप्त गर्नबाट लाभान्वित गर्दछ। यसको दुई प्रसिद्ध मोडहरू उन्नत मोड र विजार्ड मोड हुन्, जुन प्रोग्रामरहरूको लागि कुनै पनि समय अक्टोपारेमा प्रयोग गर्न राम्रो छन्। तपाईं यो व्यापक उपकरण प्रयोग गरेर सेकेन्ड भित्र आफ्नो साइट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, तपाईं साइटहरूलाई विभिन्न राम्रो-संरचित ढाँचाहरूमा एक्सेल, एचटीएमएल र पाठमा सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ।
Getleft एक सजिलो प्रयोग प्रोग्राम हो जसले तुरन्त ब्लग वा साइटलाई मद्दत गर्दछ। यसले तपाईको सम्पूर्ण साइट डाउनलोड गर्नेछ र फायदा प्राप्त गर्न बहु विकल्पहरू छन्। तपाईं पनि URL प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ र फाइलहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाई आफ्नो कम्प्युटर प्रणालीमा डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ। यो कार्यक्रम सर्वोत्तम मध्ये एक हो किनभने यो 15 विभिन्न भाषाहरूमा आउँछ, 24/7 समर्थन छ, र तपाईंको ब्राउजिङ्ग अनुभव अद्भुत र उत्कृष्ट बनाउँछ।
5 - ray ban piloto azul. स्क्रैपर
स्क्रैपर एक प्रसिद्ध क्रोम एक्सटेन्सन हो जुन सीमित डेटा निकासी गुणहरु हो तर अनलाइन अनुसन्धान सञ्चालन गर्न मद्दतकारी छ। यसले तपाईको डेटा Google स्प्रिेडशिटमा तपाईको कम्प्युटरको सट्टा पनि निर्यात गर्दछ, धेरै समय बचत गर्दछ।